Shirka IGAD oo maanta furmaya iyo madaxweyne Xasan oo ku wajahan garoonka Aadan Cadde – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shirka IGAD oo maanta furmaya iyo madaxweyne Xasan oo ku wajahan garoonka Aadan Cadde
Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya uu ka furmo shirka urur goboleedka IGAD, kaas oo la filaayo in saacadaha soo socdo uu si toos ah u furmo.
Ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa nabad-sugidda qaranka iyo kuwa AMISOM ayaa lagu daadiyay dhamaan wadooyinka gala garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Waxaa saacadaha soo socdo la filayaa in magaalada Muqdisho ay soo gaaraan madaxda dalalka ku bahoobay urur goboleedka IGAD, kuwaas oo ka qey-gali doonna shirka, waxaana sidoo kale la joojiyay dhamaan duulimaayadii ka bixi jiray ama imaan jiray garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Shir madaxeedka IGAD ayaa si rasmi ah uga furmi doonno Hoteel ku yaala garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana uu shirkaasi socon doonnaa muddo hal maalin ah.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haatan ku wajahan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, isagoona halkaasi kusoo dhaweyn doonnaa madaxda ka qeyb galeysa shirka IGAD oo saacadaha soo socdo la filaayo inay halkaasi soo gaaraan.
Ugu dambeyntii, afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa’uud Aweys Jaamac oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ajendayaasha shirka looga hadlayo ay ka mid noqon doonaan xaaladaha koonfurta Sudan, arrimaha diyaargarowga doorashada Soomaaliya, arrimo la xiriira iskaashiga iyo sidoo kale wax wada qabsiga dalalka ku bahoobay urur goboleedka IGAD.